यस्तो धन्दा गर्ने महिला प्रयोग गर्ने सामानसहित पक्राउ, उनको समान देखेर प्रहरी पनि छक्क परे ! - सिधा मिडिया
३१ आश्विन २०७८, आईतवार २०:०३ मा प्रकाशित
352 जनाले पढ़िसके
काठमान्डौ- जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले चोरीको आरोपमा एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ । भरतपुरमा नगद र गरगहना चोरी गर्ने महिला पक्राउ परेकी हुन्। पक्राउ पर्नेमा धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाँउपालिका वडा नम्वर ५ बस्ने २४ बर्षिय पुष्पा सिटौला रहेकी छन ।
भरतपुर महानगरपालिका १० बस्ने सावित्री दवाडीको घरबाट नगदसहित सुनचाँदीका गरगहना चोरी गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सिटौलालाई खोजी गरेको थियो । भरतपुर क्षेत्र आसपासमा चोरी गरी लुकिछिपी बस्दै आएकी धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा न. ५ बस्ने २४ बर्षीय पुष्पा सिटौलालाई बुधबार पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले असोज ६ गते भरतपुर महानगरपालिका ११ बाट साथमा फलामको र’ड समेत बोकेर हिडिरहेको अवस्थामा फेला पारेको हो । उनको साथबाट नगद, सुनका गहना, कैंचि, मोवाइल समेत प्रहरीले ब’रामद गरेको छ । सिटौलालाई चोरी तथा डाँ’का सम्बन्धि क’सुरमा जिल्ला अदालत चितवनबाट म्याद अनुमती लिइन अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।त्यस्तै
चितवन प्रहरीका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने सावित्री दवाडीको घरबाट कोही मानिस नभएको मौ’का छो’पी बिभिन्न सुनका गरगहना र नगद समेत चो’री भएको हो । चोरी गरेका गहना, नगद र चाल्चा फु’टाउन प्रयोग हुने फलामको र’ड समेत बोकी हिँडेको अवस्थामा निजलाई फेला पारी प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।